पदर्शनको पर्खाइमा यी चार चलचित्र, चुलिदै नेपाली सिनेमा बजार यिनको चर्चा - Experience Best News from Nepal
नेपाली चलचित्रले सोलो रिलिज पाउनु भाग्य मानिन्छ । नेपाली चलचित्र उद्योगमा हरेक हप्ता कम्तिमा पनि २ वटा चलचित्र रिलिज हुने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । वर्षमा झण्डै दुई सयभन्दा माथि चलचित्र निर्माण हुन्छन् ।
नयाँ रेकर्ड र शैलीसंगै सार्बजनिक भयो अनमोल अभिनीत चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को ट्रेलर
अब बलिउड फिल्म खेल्दै अभिनेता अनमोल केसी, जोडी बन्दैछिन् श्री देबीकि छोरी जान्हवी !
सधै नयाँ हिरोइनसँगको रोमान्समा देखिन्छन्, अनमोल केसी !! जानुहोस् अनमोलको क्रेज
अनमोलको डबल रोल !!! ‘ए मेरो हजुर ३’ को ट्रेलर सार्वजनिक